I-China uhlobo lweCryogenic ephezulu ehlanzekile ephezulu yokuhlanzeka kwenitrogen yomoya ohlukanisa abakhiqizi abakhiqizi nabaphakeli | NOMA
Uhlobo lwe-Cryogenic oluphakeme kakhulu lokuhlanzeka okuphezulu kwe-nitrogen emoyeni ukwahlukaniswa kwesitshalo se-liquid ne-oxygen generator
O2 okukhipha 350m3 / h ± 5%
Ubumsulwa be-O2 ≥99.6% O2
Ukucindezela kwe-O2 ~ 0.034MPa (G)
Ukukhishwa kwe-N2 800m3 / h ± 5%
Ubumsulwa be-N2 ≤10ppmO2
Ukucindezelwa kwe-N2 ~ 0.012 MPa (G)
Isimo sokukhishwa komkhiqizo (ku-0 ℃, 101.325Kpa)
Ingcindezi yokuqala 0.65MPa (G)
Isikhathi sokusebenza esiqhubekayo phakathi kwezikhathi ezimbili eziphindaphindayo ezingama-12months
Isikhathi sokuqala ~ Amahora angama-24
Ukusetshenziswa kwamandla okuqondile ~ 0.64kWh / mO2 (hhayi i-O2 compressor)
Umoya ongahluziwe uvela emoyeni, udlula ngesihlungi somoya sokususa uthuli kanye nezinye izinhlayiya zemishini bese ungena ku-non-lub air compressor ukuze ucindezelwe yi-compressor yesiteji emibili ukuya ku-approx. Ihamba nge-cooler bese ingena ekupholiseni iyunithi ukuthi ipholile ibe ngu-5 ~ 10 ℃. Ngemuva kwalokho iya ekushintsheni i-MS purifier ukuze isuswe umswakama, i-CO2, i-carbon hydrogen. Isihlanzisi sinezitsha ezimbili ezigcwaliswe ngesihlungo samangqamuzana. Eyodwa iyasetshenziswa ngenkathi i-anther ingaphansi kokuvuselelwa ngodoti we-nitrogen ovela ebhokisini elibandayo nangokushisa kwe-heater.
Ngemuva kokuhlanzwa, ingxenye encane yayo isetshenziswa njengegesi ethwala i-turbine expander, enye ingena ebhokisini elibandayo ukuze lipholisiswe yi-reflux (i-oxygen emsulwa, i-nitrogen emsulwa kanye ne-nitrogen kadoti) kusishintshisi esikhulu sokushisa. Ingxenye yomoya ikhishwe engxenyeni ephakathi nendawo yokushisa okukhulu futhi iya kumshini wokunweba wokukhiqiza amakhaza. Iningi lomoya onwetshiwe udlula kwi-subcooler epholile yi-oxygen kusuka kukholamu ephezulu ukulethwa kukholamu ephezulu. Ingxenye encane yayo idlula ngokudlula ukuze ichithe ipayipi le-nitrogen ngqo bese iyavuselelwa ukuze iphume ebhokisini elibandayo. Enye ingxenye yomoya iyaqhubeka ipholile isondele emoyeni ketshezi ilinga ukwehlisa ikholomu.
Emoyeni wekholomu engezansi, umoya uhlukanisiwe futhi uphuziswe njenge-nitrogen engamanzi nomoya oketshezi. Ingxenye ye-nitrogen engamanzi ekhishwe ngaphezulu kwekholomu engezansi. Umoya oketshezi ngemuva kokupholiswa futhi kuqhume uhanjiswa engxenyeni emaphakathi yekholamu ephezulu njenge-reflux.
I-oksijeni yomkhiqizo ikhishwe engxenyeni engezansi yekholomu engenhla futhi ivuselelwa nge-subcooler yomoya enwetshiwe, ukushintshaniswa okukhulu kokushisa. Ngemuva kwalokho kukhishwa kukholamu. Imfucumfucu ye-nitrogen ikhishwe engxenyeni engenhla yekholomu ephezulu futhi iyavuselelwa kwi-subcooler kanye ne-main heat exchanger ukuphuma kukholamu. Ingxenye yayo isetshenziswa njengegesi lokuvuselela i-MS purifier. I-nitrogen emsulwa ikhishwe ngenhla kwekholomu engenhla futhi iyavuselelwa emoyeni osamanzi, i-liquid nitrogen subcooler kanye ne-main exchanger yokushisa ezokhishwa ngaphandle kwekholomu.
U-oksijeni ophume kukholamu we-distillation ucindezelwe kwikhasimende.
Langaphambilini Isitshalo se-Cryogenic oxygen sibiza isitshalo somoya-mpilo
Olandelayo: Uhlobo lwe-Cryogenic mini isikali sokuhlukaniswa komoya isitshalo se-oxygen generator generator nitrogen generator argon generator
Ukusebenza kahle kwe-Oxygen Generator
Ikhwalithi Ephakeme Nitrogen Generator